Global Voices teny Malagasy » Panama: Volavolandalana iadiana amin’ny fanavakavahana noho ny safidy olona iarahana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Oktobra 2010 19:48 GMT 1	 · Mpanoratra Clotilde Castillo Nandika Erikah
Sokajy: Amerika Latina, Panamà, Lalàna, Vehivavy sy Miralenta, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Nanomboka miady hevitra mikasika ny lalàna vaovao hiaro ny olona amin'ny fanavakavahana mifototra amin'ny safidy amin'izay tian'ny olona iarhaana ny Antenimeram-pirenena Panameana.
Nanoratra tao amin'ny vohikala Corresponsales Clave  [es] i Dayra García:
Nandany ny ilay volavolandalàna laharana faha 50, “izay mametraka ny fepetra rehetra isorohana izay mety endrika fanavakavahana miorina amin'ny karazan'olona iarahana” izay natolotry ny Fikambanan'ny lehilahy sy vehivavy vaovao ao Panama (AHMNP) ny vaomieran'ny mpanatanteraka, fitsarana ary ny raharahan-dalampanorenana ao amin'ny Antenimieram-pirenena .
Ny lahatsoratra ihany koa dia mitatitra ny nambaran'i Ricardo Beteta, filohan'i AHMNP [es] :
Ny tsy fahampian'ny lalàna manohitra ny fanavakavahana miantefa any amin'ireo lahy tia lahy, vavy tia vavy, sady tia lahy no tia vavy ary niova toe-batana na taovam-pananahana no mahatonga ny firenena hilahatra amin'ilay fironana iraisampirenena hanome ny zon'ny olona manana ny sokajin'olona tiany.
Niteraka adihevitra lehibe io lohahevitra io. Raha araka ny nambaran'ny lahatsoratra iray navoakan'ny mpitatitra vaovao Enterate  [es], dia nanazava ny arseveka tao Panama, Jose Domingo Ulloa fa:
Saropady sy ahiana hiteraka olana ity lalàna ity satria hifanavakavaka ny olona any aoriana any…Tsy mitombina io volavolan-dalàna io ankehitriny fa tena hiteraka disadisa sy fanavakavahana bebe kokoa.
Nanazava ihany koa io lahatsoratra io fa ny arseveka dia:
mirona mankany amin'ny “fananganana kolontsaina tsy misy fanavakavahana”, izay araka ny fomba fijeriny dia efa tafiditra ao anatin'ny Lalàmpanorenan'i Panama ankehitriny.
Asongadin'ny lahatsoratra fa mampiahiahy izy ity ho teny fampidirana ny adihevitra mikasika ny fanambadiana sy ny fanekena ny zon'ireo mpifankatia izay mitovy fananahana, lavin'ireo vondrona nanolotra ny lalàna izany.
Sary tao amin'ny Flickr nampiasain'i Marlith nahazoan-dàlana Attribution 2.0 Generic Creative Commons license
Tao anatin'ny blaoginy Al Ser Distinto: Psicología y Diversidad [es] i Alvaro Gomez Prado , dia nandrisika ny mpamakiny mba hanaraka ny vaovao mikasika ny lalàna faha 50, izay resahan'ny Antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao:
Tsy ny hahatanteraka ny fanambadian'ny mitovy fananahana no tanjon'ity lalàna ity, fa ny hiarovana ny vondrona isan-karazany sy ny fahasalamany ara-pananahana. Aoka ianareo, ry mpamaky hajaina, tsy hanaiky ho voasasan'ireo manohitra ny anomezana ny zon'ireo vondrona vitsy an'isa atidoha . Tsy maninona mihitsy na psikology, na mpanao gazety, na mpanao politika, na mpandraharaha, na mpanakanto na havana ihany koa. Azo itokiana ny filazàna fa amin'ny ankapobeny, dia noho ny antony manokana no mahatonga azy ireo tsy manaiky fa mitovy zo avokoa ny olombelona rehetra ary tena mampalaelo tokoa ny fanekentsika ny fanitsakitsahana ny mitovy amintsika (efa mijoro ho fikambanana izy na tsia).
Nodinihan'ny mpitoraka blaogy maro tao Panama tamin'ny endrika maro io lohahevitra mikasika ny fanavakavahana vokatry ny fahasamihafana eo amin'ny safidy amin'ny sokajin'olona tiana iarahana io. Nandalina akaiky mikasika io lohahevitra io i Ariel, tao amin'ny blaogy Contr apunto  [es], tao anatin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe ” fanavakavahana noho ny antony fahasamihafana eo amin'ny safidy amin'ny olona tiana iarahana (lahatsoratra iray noezahana natao ho mazava tsara nefa tsy mazava mihitsy)”, nivoaka tamin'ny volana desambra 2009. Hoy izy nanambara izany:
Raha toa ka tia ny mitovy fananahana aminao ianao dia tsy mahatonga anao ho tsinotsinona akory, na koa hoe mampihena ny lanjanao, tsy mampihena ny voninahitrao eo amin'ny fitiavana sy fahalalana, eo amin'ny asa aman'andraikitra, namana, ny fitandrovana ny rariny na ny zo hafa rehetra izay fonosin'ilay antsoina hoe fiainana. Ary raha toa ianao ka tia olona hafa fananahana ka mankahala ny fomba fiainan'ny olona tia mitovy fananahana aminy dia tsy mahatonga anao ho olona ambony mihitsy izany. Raha te hiteny aho hoe marikoriko ahy ny mahita lehilahy roa mifanoroka dia tsy midika akory izany fa manan-danja noho izy aho na koa hoe very ny hasiny amin'ny mahaolombelona azy. Torak'izay koa, raha miteny aho hoe mahatsiravina ahy ny mahita olona iray mandrora havia sy havanana manerana ny làlana dia tsy hisy olona afaka hiteny amiko mihitsy hoe manavakavaka olona aho.
Ao Panama, ny lalàna iadiana hevitra ankehitriny dia ny momba ny fanavakavahana mifototra amin'ny safidy eo amin'ny sokajin'olona tiana iarahana fa tsy mikasika ny fanambadian'ny olona mitovy sokajy sy ny fanekena ny zo, na izany aza, nanokatra varavarana nanombohana resaka momba ireo olana ireo ny adihevitra mikasika io lalàna io. Vao haingana kely, nanambara ny vohikala Enterate [es] fa:
Saika ny olona valo amin'ny folo ao Panama dia tsy nanaiky ny lalàna mamela ny fanambadian'ny olona mitovy sokajy (fananahana).
Tamin'ny volana jolay tamin'ity taona ity, i Nelva Arauz Reyes, dia nanoratra tao amin'ny blaogy Escritores de la Libertad  [es], mikasika ny fanekena ilay lalàna izay mamela ny fanambadian'ny olona mitovy sokajy sy ny fanomezana ny zon'izy ireo tao Argentine, izay firenena voalohany tao Amerika Atsimo namoaka lalàna mikasika an'io teo anivon'ny firenena.  Nanoratra izy:
Tsy dia maro an'isa ireo antoko mpivavaka avy ao amin'ny pretra sy orthodoksa. Mieritreritra aho fa mety tsy tonga saina izy ireo fa nampirborobo ny fitiavana sy fitoviana i Jesoa. Ary tahaka ny iray tamin'ny senatera avy any Argentine io izay nilaza fa tokony atsahatra ny adihevitra ela be sy naharitra ora maro teo amin'ny fireneny “Fa maninona moa isika no tsy manao ezaka goavam-be andavana ny hoe manan-jo mitovy amintsika ny hafa?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/26/9709/
 AHMNP [es]: http://www.facebook.com/ahmnp.glbt?v=wall
 Al Ser Distinto: Psicología y Diversidad : http://alserdistinto.blogspot.com/2010/09/en-panama-hay-discriminacion.html
 Enterate : http://www.enterate.com.pa/Noticias/Noticias-de-Panama/Casi-ocho-de-cada-diez-panamenos-se-opone-al-matrimonio-entre-homosexuales.html
 firenena voalohany tao Amerika Atsimo namoaka lalàna mikasika an'io teo anivon'ny firenena.: https://globalvoicesonline.org/2010/07/15/argentina-senate-approves-equal-marriage/